Etu esi wụnye Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal nzọụkwụ site nzọụkwụ | Site na Linux
Etu esi wụnye Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal site na nzọụkwụ
Ọ bụrụ na ị bụ onye bịara ọhụrụ na Linux, ha nwere ike ịgwa gị ka ị nwalee Ubuntu: nkesa dị mfe ma dịkwa mfe iji, na mgbakwunye, nwere ihu enyi enyi (ọ bụ ezie na ọ dị iche na ihe ị na-emebu na Windows) na nke amuru na ebumnuche imepụta "Linux maka mmadu" na nkeji ohuru a anyi na akowa otu esi etinye ya Ubuntu 12.10 Quetzal Quantzal nzọụkwụ site nzọụkwụ ... ee, ka dummies.
1 Ntinye tupu
2 Nzọụkwụ site na ntinye
Tupu ịwụnye Ubuntu 12.10 ị ga-arụ usoro 3:
download ihe oyiyi Ubuntu ISO. Ọ bụrụ na ịmaghị ụdị nke ibudata, ana m akwado ka ị gụọ nke a mmeghe gaa n'echiche ụfọdụ ga - enyere gị aka ịhọrọ nkesa ọ bụla.
Ọkụ ISO oyiyi na CD / DVD ma ọ bụ a kwere.
Hazi BIOS ka ọ bufee CD / DVD ma ọ bụ site na pendrive, dabere na ihe ị họọrọ na usoro gara aga.
Nzọụkwụ site na ntinye
Ozugbo a hazi BIOS n'ụzọ ziri ezi iji bufee site na pendrive, malitegharia igwe na pendrive na ebe. Mgbe obere oge gachara, GRUB 2, Ubuntu booter loader, ga-apụta. Ndị a bụ ụzọ 2 ị ga-aga. Ọ bụ ihe amamihe dị na mbụ ịnwale Ubuntu na-enweghị wụnye, iji hụ ma sistemụ ahụ ọ na-arụ ọrụ nke ọma; nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ngwaike gị achọpụta gị nke ọma, ọ bụrụ na usoro a masịrị gị, wdg. Nhọrọ nke abụọ bụ ịwụnye usoro ozugbo.
N'okwu a, anyị ga-ahọrọ nhọrọ Gbalịa Ubuntu na-etinyeghị.
Ozugbo akpụkpọ ụkwụ Ubuntu, pịa akara ngosi Wụnye Ubuntu 12.10. Ọkachamara nwụnye ga-apụta.
Ihe mbụ ịhọrọ bụ asụsụ ntinye. Họrọ Español, wee pịa bọtịnụ ahụ Wụnye Ubuntu.
Kwenye na ị na-ezute opekempe nrụnye chọrọ site na ịpị Gaa n’ihu. Okwesiri ighota na nani ihe di nkpa choro bu inwe oghere disk di mkpa.
Inwe njikọ Internetntanetị akwadoro mana ọ bụghị naanị ihe achọrọ ebe ọ bụ na ị ga-enwe ike ịhapụ nnabata nke nchịkọta maka oge ọ ga-adịrị gị mma karị.
A na-atụ aro ya, ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị ihe achọrọ, ka ejikọọ ya na ntinye ikike. Nke a bụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji laptọọpụ, ebe ọ bụ na usoro nrụnye na-ewe ike dị ukwuu ma ọ gaghị ewe ọgụgụ isi ịghọta na ọ dịghị mma maka igwe ahụ ịgbanyụ n'etiti nwụnye, obere ma ọ bụrụ ọ na-emekọ banyere ntinye nke sistemụ arụmọrụ.
Tụkwasị na nke a, a na-enye anyị nhọrọ ịhọrọ ma ọ bụrụ na anyị ga-ebudata mmelite sistemụ mgbe ị na-etinye Ubuntu, nhọrọ m na-atụghị aro ịlele n'ihi na ọ nwere ike igbu oge nrụnye nke ọma.
Nhọrọ ọzọ bụ ibudata ngwanrọ nke atọ nke na-enye anyị ohere igwu egwu ọdịnaya ọtụtụ mgbasa ozi dịka faịlụ mp3 ma ọ bụ lelee ọdịnaya multimedia na web mepụtara na Flash, dị ka ụfọdụ vidiyo na YouTube ma ọ bụ egwuregwu na weebụsaịtị dịka Facebook .
Mụ onwe m na-ahọrọ ịwụnye ngwanrọ a niile aka ozugbo usoro nrụnye zuru ezu, mana enweghị nsogbu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele nhọrọ a ma mee ya n'oge usoro nrụnye.
Nke a bụ akụkụ kachasị ike: disk nkewa.
Nke mbu, aghaghi ime ka o doo anya na ihuenyo nwere ike ịdịtụ iche, dabere na sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ sistemụ nke ị tinyeworị na igwe ahụ. Yabụ, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere usoro ochie nke Ubuntu arụnyere, a ga-egosipụta nhọrọ iji melite sistemụ ahụ.
N'okwu a, ka anyị chee na ọnọdụ ahụkarị: ị zụtara kọmputa, ọ bịara na Windows 8, ị ghọtara na ọ dị nzuzu ịchọrọ ịnwale ihe ọhụrụ.
Lee ụzọ 3 ị ga-aga:
a) Wepu sistemụ arụmọrụ ochie ma wụnye: nke a bụ nhọrọ kachasị mfe: hichapụ ihe niile ma wụnye n'elu. Enweghị mkpa ikpo isi gị maka ikewa diski ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya.
b) Wụnye Ubuntu n'akụkụ Windows: Nke a na - enye anyị ohere ịrụnye ihe ntinye aka na ntinye nke Microsoft Windows ugbu a, na - enye anyị nhọrọ nke ịmepụta nkebi maka Ubuntu Linux site na ohere disk nwere igwe anyị nwere, ọbụlagodi inwe ike ịhazigharị nha nke nkebi ahụ ozugbo. site na ntinye ederede.
c) Nkebi nke disk aka.
Ọ bụrụ na ịhọrọ nhọrọ nke atọ, ọkachamara na-ekekọrịta disk ga-amalite. Ya mere, nzọụkwụ a bụ nhọrọ. A na-atụ aro ya maka ndị ọrụ etiti ma ọ bụ ndị ọrụ dị elu maara ihe nke a pụtara. Nzọụkwụ ọ bụla na-ezighi ezi nwere ike ibute ọnwụ data na diski. Ọ bụrụ n’ịchọghị itinye ndụ ya n’ihe egwu, emela ya.
Ọ bụrụ na ị kpebie na nhọrọ a, nkwanye m bụ ịkekọrịta disk n'ime akụkụ 3:
1.- Nkebi mgbọrọgwụ. Ebee ka a gha etinye usoro. Have ga-arịgo ya na /. Ana m akwado usoro faịlụ EXT4. The kacha nta size ga-dịkarịa ala 5 gigs (2gb maka isi usoro na ndị ọzọ maka ngwa na ị na-aga wụnye n'ọdịnihu). M kwughachiri, nke a bụ nke kacha nta, ọ bụghị nke dị mma (nke nwere ike ịbụ gburugburu 10/15 gb).
2.- Nkebi home. Kedu ebe akwụkwọ gị niile ga-adị. Havekwesịrị ịkwado ya na / ụlọ. Ana m akwado usoro faịlụ EXT4. The size bụ a kpere onwe nhọrọ na-adabere nanị na otú ihe ị ga-eji ya.
3.- Nkebi gbanwee. Oghere echekwara na diski maka ebe nchekwa (mgbe ị gwụchara RAM usoro ahụ na-eji ohere diski a iji "gbasaa" ya). Enweghị ike ịhapụ ngalaba a ma ọ ga-adị ee ma ọ bụ ee. Nke a tụrụ aro bụ: a) maka nkebi nke 1gb ma ọ bụ obere, mgbanwe ahụ kwesịrị ịbụ okpukpu abụọ ebe nchekwa RAM; b) maka nkebi nke 2gb ma ọ bụ karịa, mgbanwe ahụ ga-abụ opekata mpe 1gb.
Mgbe ihe niile dị njikere, pịa OK na usoro ga-ajụ gị ma ị kwenyere na mgbanwe ndị ahụ.
Pịa na Wụnye ugbu a. Ihe mbụ ị ga - ahọrọ oge oge:
Ihe ọzọ anyị ga-ahazi ga-abụ kiiboodu. Echefula iji nwalee keyboard gị ahọpụtara (ọkachasị igodo dị ka ñ, ç na Altgr + ụfọdụ igodo njikọ). Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma, nwalee nhazi keyboard ndị ọzọ.
Mgbe ịhazigharị keyboard ahụ na-abịa nhazi ọrụ.
Naanị ị ga-abanye aha njirimara na paswọọdụ, aha maka kọmputa ma chọpụta ma ọ dị mkpa ịrịọ paswọọdụ ịbanye. Site na ebe a, ọ ga-ekwe omume izobe folda nkeonwe, nke m na-akwadoghị (n'ihi na ọ nwere ike belata usoro) ọ gwụla ma ị na-echegbu onwe gị banyere nchekwa nke akwụkwọ echekwara na igwe ahụ.
Mgbe obere oge gasịrị, faịlụ faịlụ ahụ ga-agwụ. Ka ọ dị ugbu a, ịnwere ike ịnụ ụtọ ụfọdụ onyonyo na-egosi ụfọdụ uru Ubuntu bara.
Ozugbo ihe niile dị njikere, ịnwere ike ịmalitegharịa ma ọ bụ gaa n'ihu ịnwale usoro ahụ.
N'ikpeazụ, reboot ma wepu diski ma ọ bụ pendrive nke ị jiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Etu esi wụnye Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal site na nzọụkwụ
Ihe 33 kwuru, hapụ nke gị
Jordan bịara dijo
Achọrọ m enyemaka na Ubuntu: (, n'oge m na-etinye faịlụ idetuo na budata mmelite, mana na njedebe ihe niile m rụnyere na-alaghachi ka ọ bụrụ na m gbanwee nwụnye m laptọọpụ bụ Hp 420 2gb nke Ram Ram, 320 Hard Disk Intel Dual Core T4500 2.33gHz, eserese bụ 64mb
Zaghachi Jordan Camey
Njikọ njikọ dijo
Enwere m naanị ajụjụ, enwere usoro ọzọ yana Linux ma ọ bụ naanị ubuntu?
Zaghachi Oni Link
lee onwe gi http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linux_Distribution_Timeline.svg
mana ibido na Linux ubuntu di nfe nke oma na pc nkeonwe guo nke a http://www.slideshare.net/zer0/debian-vs-ubuntu
Zaghachi CARLOS GELPUD
enwere ihe kpatara ya nwere ike ịbụ na ịnweghị ikike nchịkwa ... sudo na paswọọdụ nrụnye gị na-achọ enyemaka site na otu ndị ọrụ Linux
Idenye aha na-aga na saịtị:
google na-eji free software abụghị ndakọrịta nsogbu ọbụna ya chrome otú bụ gbanwetụrụ ubuntu
Gaius gọziri dijo
Nke ahụ bụ ihe kachasị njọ i nwere ike ime, Carlos. Ingwụnye Ubuntu site na Wubi dị mfe, mana o nwere nsogbu ụfọdụ metụtara, dịka ụbọchị ịchọrọ ịhazi nkebi ...
Buut MGBE bios ọrụ arụnye wụnye ya ka ị rụnyere ya.
Zaghachi Gaius Baltar
Nke ahụ bụ eziokwu mana ha chọrọ igosi na nke ahụ bụ ihe dị mkpa ma mesịa, ha onwe ha ga-amata ihe ha ga-eme na-enweghị ịgwa ha ihe niile
nhọrọ ahụ bụ nke na - enweghị ihe mgbochi nke nkewa site na ịwụnye ya na windos ma ọ bụ n'ime windo nke dịka mmemme ọ bụla = winan ma ọ bụ Excel
N'ihe banyere inweworị nkewa emere naanị iji wụnye Ubuntu, olee nhọrọ ị ga-ahọrọ?
Ma ọ bụ tupu na-ahapụ ịhọrọ nkebi nke disk na anyị chọrọ iji wụnye?
Lelee azịza Oscar Morales, echefuru m ikwu na ọ bụ naanị n'ihi ntụkwasị obi ka ukwuu na ndị mbido Ubuntu. - nke ọzọ bụ na iso installer cd ha ga-usoro na ext3 ma ọ bụ ịgbanwe ugwu isi na nkebi. ị nwekwara ike ime ha na cd iso
pc gị bụ igwe dị egwu
Ọ bụrụ na m wụnye ubuntu na nkebi na m chọrọ ịhụ faịlụ site ubuntu m nwere na windo nkebi, ọ ga - ekwe omume ??
Gbalịa ya, otu ọ si aga na ị nwere ike ihicha. eriri USB ka egweri na windo, ekwetaghị ohere
ma ọ bụrụ na m mee nkebi na Partition Ime Anwansi adịghị mma, ma ọ bụ ịbụ nkebi, agaghị ọzọ sistem pụta? ihe m na-eme??
Enwere m ike ịme nkebi, ka m ga-enye ya n'akụkụ windo 7?
Zaghachi Oscar Morales
ọ bụrụ na ọ dị mma m na-akwado ịmepụta atọ / "opekempe 8 gb", gbanwee "okpukpu abụọ ebule nke pc gị", ụlọ "opekempe 3 gb", na D: site na azụ gaa n'ihu "ka ị ghara imebi faịlụ gị"
Kpee ya na gmail ma ọ bụ webapp, atụla oke nganga iche na otu ihe ahụ na-eme anyị niile.
Zaghachi Tito Vilanova
Gịnị mere i ji na-awakpo ya? Ikekwe ọ chọrọ enyemaka.
Enwere m ajụjụ, Enwere m PC PC ochie nwere nkọwa ndị a: 4Gb ram DDR2, Intel core 2 duo processor na 2,66 Ghz, 1 Gb nke vidiyo vidiyo Nividia 8400Gs, 250 Gb nke diski ike, yana nkọwa ndị a m nwere ike ịwụnye Quantal Quetzal ? (Na-enweghị nsogbu were were were?)
Nke ahụ abụghị otu ma ọlị, ọ dịghị ihe ochie. M na-arụ ọrụ na laptọọpụ site na 3 afọ gara aga, na-esighi ike karịa nke ahụ yana yana 512MB na m na-edekọ ọdịyo dị ala na-egwu egwu ma na-egwu egwuregwu ọhụrụ dị egwu.
Susho anyụike dijo
mgbe m malitegharia enwetaghi m iwe iwe ịhọrọ sistemụ ịbanye, ịmara etu?
Zaghachi Susho Ax
mgbe ị nọ na nkewa jide n'aka na n'okpuru ọ na-ekwu ebe ịwụnye boot booter, jide n'aka na ọ dị na dev / sda (ọ na-abụkarị nhọrọ mbụ)
Zaghachi Sir Co $ t Granda
Kedu ka m si mara nke bụ, ọ bụrụ na Windows ma ọ bụ Ubuntu, mgbe ị na-agbanwegharị na Wụnye Ubuntu n'akụkụ Windows
ihe nkuzi iji tinye ubuntu di nma nke oma ... Naanị ihe na - adighi ka o ziri ezi nye m; iji kwuo na windo bụ ihe nzuzu, na ị nweghị mmasị na ya apụtaghị na ọ dị njọ. O nwere ike ịbụ ekele na-enweghị atụ ma wee kpụọ.
Zaghachi Elver Gonzalez
Na agba nke nkewa dị iche iche na ọ na-ekwukwa aha
Roger Eduardo kwuru dijo
Mana ọ na-ezo aka na akụkụ ebe arụnyere ya n'akụkụ windo8, igbe abụọ ahụ enwere ike ịhazigharị na-apụta ... nsogbu bụ na ọ naghị ekwu igbe ọ nwere.
Ọ bụrụ na ọ dịka ubuntu 12.04 onye nke dị n’aka nri bụ ubuntu na onye aka ekpe bụ windo.
Achọghị m itinye ya n'ihe egwu, aga m na-ele anya.
Zaghachi Roger Eduardo
mbipute a dị mma
Zaghachi to alonso esparza
Antonio Alcaraz placeholder oyiyi dijo
Achọrọ m ịwụnye ubuntu na obere laptọọpụ HP L110, ọ nweghị CD ma ọ bụ DVD naanị USB, kedu ka m ga esi esi wụnye quetzal ahụ?
Zaghachi Antonio Alcaraz
Ana m atụ aro ka ị gụọ https://blog.desdelinux.net/distribuciones
Nọgidenụ na-enyere ndị anyị malitere na LINUX software a n'efu na-adịghị achọ ịba ọgaranya ka Microsoft, nke na-enweghị obi ebere na-aba ọgaranya na Bill Gates a nwere ego buru ibu ma na ọ maghị na ọnụahịa nke ngwanrọ ha mepụtara dị oke oke ọnụ enwere nsonaazụ oke ego na maka gịnị ???? Ndị US kwesịrị ịgba ya akwụkwọ maka mmụba na iwu na-akwadoghị dabere na mkpa ndị ọrụ.
Enwere m ajụjụ ………… na ọ bụ na mgbe m nwara ịwụnye Ubuntu Windows 8 anaghị amata m, kedụ ihe m ga-eme ka Windows 8 wee mata ya, etinyeworị ya na kọmputa m …… Daalụ gị
Daalụ maka ndụmọdụ gị, m ga-achọ ịma ma m nwere ike ịrịgo ya na XP ebe ọ bụ na ha na-ekwu na sistemụ a nwere obere oge iji dịrị ndụ. Enweghi ngwụcha ekele.
Zaghachi Ramón Lozano
MGBE A W INBIRI, Amaghị m otu esi ebido njikọ ndị ahụ na ndị ọrụ ntanetị yana otu m ga-esi nyefe ozi nke m nwere na leta ikuku m na egwu m ahọrọla na YOUTOBE na otu m ga-esi nwee ike ịtụgharị ya OZI NA UB?
Zaghachi JORGE WIEDMAN
enweghị isi dijo
Etu esi wụnye Ubuntu 16.04 site na ncha?
LibreOffice 4.0.0 RC1 nwere ike ịgụnye nkwado maka Personas
Gam akporo SDK abụkwaghị ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ